“Waxaan booqasho ku tagay Muqdisho” [Daawo Sawirada] | Somaliska
Isbuucii la soo dhaafay waxaan booqasho gaaban ku tagay magaalada Muqdisho, anigoo isha soo mariyay qeybo badan oo ka mid ah magaalada. Sanadkii hore bishii December ayay ahayd markii aan booqasho u tagay Muqdisho anigoo soo daabacay mowduuc ku saabsan sida aan u arkay xaalada magaalada. Hadaba maxaa isbedalay?
Dhinaca amaanka ayaa la dhihi karaa wax badan iskama badalin magaalada. Intii aan joogay magaalada ayaysan ka dhicin wax amaan daro ah, markii aan wareystay dadka magaalada ayay ii soo baxday in aysan runtii xiiso ku ahayn wararka la xiriira qaraxyada iyo dilalka iyagoo aan dhag jalaq u siin arimahaas. Qofkasta ayaa subixii u kacaya shaqada ama waxbarashada. Markii aad akhriso wararka ay qorayaan websiteyada iyo xaqiiqada dhabta ah ee ka jidha magaalada ayaa dareemaysaa sida xaaladu tahay. Dhibaatada ugu weyn ee hortaagan in magaalada Muqdisho ay noqoto 100% amaan ayaa la dhihi karaa waa dabeecada ciidamada dowlada, oo aan indhahayga ku arkay iyaga oo dadka leejo ka qaadaya. Ciidamada ayaa iyaguna eeda dusha ka saaraya madaxda dowlada oo aan bixin mushaaraadka ciidamada.
Si kastaba ha ahaatee, xaalada amaanka ee Muqdisho ayaa ahayd mid wanaagsan balse waxay qaadan doontaa mudo inta ay noqonayso magaalo 100% amaan ah.
Dhinaca ganacsiga ayaa horumarka ugu weyn laga sameeyay, magaalada ayaa waxaa ku soo kordhay dhismayaal cusub, shirkado cusub iyo fikrado cusub oo horumar muuqda laga sameeyay arimahaas. Ganacsiga magaalada ayaa ah mid si heer sare ku socda iyadoo magaalada ay weli ku soo qulqulayaan qurbo joog doonaysa in ay ganacsiyo ka sameeyaan magaalada. Waxaa sidoo kale dhismayaal ku socdaan wadooyinka muqdisho, iyadoo shirkado Turkey ah ay dhisayaan wadada airpoorka iyo qeybo kale oo ka mid ah magaalada. Markii aad si fiican ugu fiirsato arimahaan horumarka leh ee ka socda Muqdisho ayaa waxaa ku galaya rajo aad u sareyso adigoo iska hilmaamaya xaalada amaanka.
Si kastaba ha ahaatee, horumarka ganacsiga ayaa sidoo kale keenay in heerka nolosha uu aad kor ugu kaco, guryaha iyo maciishada ayaa aad qaali u noqday. Magaalada Muqdisho ayaa hada la dhihi karaa waa meesha ugu qaalisan wadanka Somalia. Lacagta faraha badan ee soo gashay magaalada ayaa aad kor ugu qaaday qiimaha nolosha.
Dhinaca waxbarashada ayaa aad ii dhiiri galisay. Dhalinyarada Muqdisho ayaa u muuqdo kuwo aad ugu baraarugay qiimaha waxbarashada. Magaalada ayaa waxaa ku yaala kumanaan iskuul iyo in ka badan 30 jaamacadood.
Ugu dambeyntii inkastoo aan dhagaysano siyaasiyiin dhaliilaya dowlada Somalia, ayaa dadka muqdisho waxay u muuqdeen kuwo waqti siinaya isla markaana u dulqaadanaya madaxdooda. Markii aad la sheekaysato dadka magaalada ayay kuu sheegayaan in ay ku faraxsanyihiin dowlada isla markaana ay filayaan in waxyaabo muhiim ah ay qaban doonto.
Maashaa allaa Jimcaale waad mahadsan tahay warbixintaa inshaa allaah adiga waad baashaashay anigu wxaanba wadankii dib ugu noqon waayey ilaa 2007 oo aan qurbaha si fiican u tagey, marka waanaba sugu la,ahay waxaan gaari doonaa Muqdishu december 2013. Marka waadba i dhiiri galisay sida aad ugu bareeraty inaad Muqdsiho tagto. Lakiin Magaaladda meeelo kooban ayaad ka tagtay waxaan kaa codsanayaa daafaha magaaladana inaa dtagtid oo waliba sawiro ka soo qadid maya lambar afar iyo airporka kaliya illaa laba koontrool ee magaalada amaankeeda nooga soo waran ee Afgooye iyo kan Balcad. Mahadsanid.
A/s Waxaa shaley Magaalada muqdisho lagu diley Allaha u naxariistee Xildhibaan Xuseen Cabdisalaan Maxamed…… Waa maxay marka waxaad ka sheekeyneyso mise adigana Tarsan iyo Gaafow ayaa kuu soo Qanjiiriyey. Walaalow Ilaahey ka cabso. Markaad doonto waxaad tiraahdaa Webkaan Shaqo kuma lahan Siyaasada ……………………………………… Alif wax male iyo wuu leeyahayna adiga ayaa lagaa hayaa……………..?????????????
Dood kulul. Ka Jawaab? 9 11
Waa dhab in magaalada muqdisho sohagaagtay amaankeyda sida jimcaale sheygay ciidamada dowladad ayaa weli habcsanaan lkn qofti taarget ah si sahlan ayaa lagodili karaa inshallaah an sabarno wax walba ok ayay noqonayaan
Runsheeg: waan ku salaamay marka hore sxb.Marka xiga sxb jimcaale kama hadlin wax qabyaalad ama siyasad ku saabsan ee wuxuu ka hadlay Magaalo madaxda Soomaaliya wixii dhib ah ee horay uga jiray iyo horumarka ay sameeysay maanta,kaasoo ah in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu ku farxo.Muqdisho waa caasimaadii wadanka soomaaliya daadkoo dhan ayeey ka dhaxeysaa. Marka sxb waxeey ila tahay in qurba joogta Soomaaliyeed ee farxad u tahay waxa ka socdo Caasimadoodii Muqdisho. Jimcaale sooma qaadin taagerada Qof Qabiil ama koox (Runsheegow) Maqaalka jimcaale uu soo qoray si wa naagsan u aqriso mahadsanid:
Reer waqooy ma arki karaan muqdushoo nabad eh alaha caafiyo runti aniga muqdisho 2005 baan kasoo tagay sanadkaan baan dib ugu laabtay farqiga u dhaxeeya kaliya waxaa fahmi kara qofki ku noolaa magaalada xiliyadii dagaalada alx ilaah ha inoo siyaadiyo nabada
@ Run-sheeg qofka wato horta cudur fogaaday ayaa ka muuqda qoraalkaada, allaha ku caafiy.
Qoraalkaan siyaasad shaqo kuma laha ee horumarka muqdisho ayuu ka hadlay qofka soo qoray.
aniga ree muqdisho maahi ree Hiiraan ayaan ahay waana ku farxay runtii waxaana i gashay qiiro wadani nimo markii aan daawaday sawirada dhismaha ka socdo Muqdisho.
Horumarka dalkeena ninka aan ku faraxsaneeyn waa jaahil qalbigiisu madoowyahay. Run-sheeg qofka watoow cudurkaada iyo shartaada illaaheey ayaan ka magan galay